"विप्लव दाई हाइड्रोजन बम दिनुस् मोदीलाई उडाउँछु" - USNEPALNEWS.COM
नेपाली जनतालाई भेडा सम्झिने नरेन्द्र मोदिको नेपाल भ्रमणलाई बहिस्कार गर्नु नेपाली जनताको स्वाभिमान जोगाउनु हो ।
नेपाली नेताहरु मोदीको पाल्तु कुकुर भएपनि नेपाली जनता स्वाभिमान हुन, पाल्तु कुकुर कदापि होइनन् भन्ने परिचय दिनु हाम्रो कर्तव्य हो ।
इतिहासले भन्छ ‘नेपालीहरु पुर्खौ देखि कुनै देशका दास होइनन्’ । बिरताको इतिहास नेपाली जनताको आफ्नो इतिहास हो, जो दुनियालार्इ थाहा छ ।
मोदीको अपमान हामीले धेरै पटक खेपेका छौँ । ३ करोड नेपालीलाई नाकाबन्दी गरेर दुख दिएको बिगतलाई नेपाली जनताले चाहेर पनि भुल्ने वाला छैनन् ।
सिमाक्षेत्रमा हाम्रो भुमि मिचिएको पिडा ३ करोड नेपाली जनताको हृदयलाई थाहा छ ।कालापानी र लिपू लेकमाथिको भारतीय ज्यादती स्वाभिमान नेपालीलाई थाहा छ ।
सीमाक्षेत्रमा मोदिका भाँडाका टट्टू (एसएसपी) को रवैयाको पिडाले सिमाबासिलाई पोलिरहेको छ ।
यो देशको नेतृत्व गर्ने मानिस दलाल हुँदा, देशबासीले यिनै कालापारे ९भारतीय० हरुबाट झेलिरहेको पिडा सहि नसक्नु छ ।
अब तपाईहरु आफै भन्नुस, के स्वाभिमान नेपालीहरुले अपमान सहेर बस्न सक्छन ? के गोर्खाली बहादुरहरुको नसा नसामा बग्ने स्वाभिमानको तातो रगतले सहन सक्छ ?
आउनुस्, अब मोदीको खोपडी उतार्नेबेला आयो । कित स्वाभिमानलाई झिकेर मोदीको रद्दीको टोकरीमा राखौ, नत्र स्वाभिमानका लागि डटेर सामना गरौ ।
एक पटक मोदीको देशलाई नियालेर हेर्नुहोस, मजदुर गरीब र किसानहरु सडक तथा पुलमुनि बास बनाएर बनाएर बसेका छन् ।
जुन देशमा गरिव र धनि बिचको बर्गीय विभेद आकाश र जमिनको फरक छ, त्यस्तो देशले नेपाललाई के सहयोग गर्छ रु त्यो देशको न्यायालयको सिको गर्नुको के अर्थ ?
यस अर्थमा हामी नेपाली नागरिक हुनुमा भाग्यमानी हौ । सबैलाई चेतना होस, हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि गिद्दे नजर लगाउन मोदीको आगमन हुँदैछ ।
मोदीको भ्रमणले नेपाली नेताहरुको स्वार्थ पूर्ति हुनेछ तर जनताको स्वाभिमानमा आघात पुग्ने छ ।
यो कुरा विभिन्न समयका भ्रमण र तिनै भ्रमणबाट हुने कथित सम्झौताहरुले देशबासीलाई रुवाबासी बनाई रहेको इतिहास हाम्रो घर आगनमा छ ।
नेपालका लम्पसारवादीहरुले यो कुरा बुझेर पनि झुक्नु हाम्रो लागि धोका छ, मोदीलाई स्वागत गर्ने लम्पसारवादी संग हिसाब किताव गर्दै गरौँला ।
तर मोदीको भ्रमणलाई रोक्ने अन्तिम उपाए भनेको हाइड्रोजन बमको प्रयोग गर्ने वेला आएको छ ।
विप्लव दाइ सुरुङ्ग युद्धमा प्रयोग गर्ने हाइड्रोजन बम खोई कहाँ छन् ? हामी अब मोदी र नेपालका दलालहरुको दास भएर बाँच्न सक्दैनौं ।
अन्याय र अत्याचार सहन पनि तयार छैनौँ । हाइड्रोजन बम दिनुस मोदीलाई उडाएर फेरी स्वाभिमानको परिचय दिन तयार छौँ ।
हाम्रा पुर्खाले सुम्पिएको बिरताको परिचय पनि यहि हो । मरेर पनि स्वाभिमान बचाउँनु बहादुरको दायित्व हो ।
रासस	 September 22, 2016